ကျောက်ကပ် ၁ ခါဆေးတိုင်း ငွေ တွေ ကုန်တယ်။ ငွေမကုန်စေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်! – Myanmar News Groups
ကျောက်ကပ် ၁ ခါဆေးတိုင်း ငွေ တွေ ကုန်တယ်။ ငွေမကုန်စေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်!
ကျောက်ကပ် ၁ ခါဆေးရင် ၄ သောင်း ၅ သောင်း ကုန်တယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုမကုန်အောင် ကျောက်ကပ်ကို ဒီလို အားဖြည့်ပါ
မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကျောက်ကပ် ဆေးနေရလို့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ဌာန တစ်ခုကိုသွားကြည့်ပါတယ် အဲဒီမှာအံ့သြရတာတစ်ခုက ကျောက်ကပ်လာဆေးနေကြရတဲ့သူတွေထဲမှာ အသက်ကြီးသူတွေအပြင် လူငယ်လေးတွေပါ ကျောက်ကပ် လာဆေးနေကြရတာကို တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာကျောပိုးအိပ်လေးတွေနဲ့ ကျောင်းသားအရွယ်တွေပါ။
ကျောက်ကပ်လာ ဆေးပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြဲပန်ထွက်သွားကြတယ်။ အဲဒါနေ့စဉ်ပါပဲတဲ့။ အဲ့လိုသာခဏခဏဆေးနေရရင်မလွယ်ဘူး။ ကျောက်ကပ်တစ်ခါဆေးရင် လေးငါးသောင်းကုန်တယ်လေ။တစ်သက်လုံးပဲဆေးနေရတော့မှာလား။
ဒီကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ တရုတ်နို့မှုန့်လိုအဆိပ်တွေသောက်ပြီး ကြီးလာကြရတဲ့ကလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေပြီလဲ။ ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာကျနော်တို့ စားသောက်နေရတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေအများကြီးပါနေတဲ့ အတွက်လူကြီးလူငယ် မရွေး ကျောက်ကပ်တွေထိခိုက်နေကြရပါပြီ။ အရင်ကတော့ကျောက်ကပ်ကို ဒုက္ခပေးမယ့်ကျောက်တွေကို ကျောက်ဖယုံသီးနဲ့ဖယ်ရှားပေးတဲ့အကြောင်းတွေကို ပဲဦးစားပေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ကျောက်ကပ်လုံးဝခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကျောက်ကပ်ဆဲလ်အသစ်တွေတည် ဆောက်ပြီးပြုပြင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို အမြန်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်လို့ ယူဆပြီးအဲဒီအကြောင်းကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
ကျောက်က ပ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ် မှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂ ါတစ်ခုပါ။ သွေး ထဲကအဆိပ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းကနေစွန့်ပစ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပေးပါတယ်။အဆိပ်တွေများလာရင်တော့ကျောက်ကပ် လည်း ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘူး။ မနိုင်တော့အရှုံးပေးရတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာကျောက်ကပ်ကဆဲလ်တွေစတင်ပြီး ပျက်စီးတော့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေရပ်ဆိုင်းပြီဆိုရင်တော့ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသွားပါပြီ။
ပဲကတ္တီပါကိုသေချာလေ့လာကြည့်ပါ။ ကျောက်ကပ်နဲ့တစ်ပုံစံထည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပဲကတ္တီပါမှာပါတဲ့အခါးဓာတ်လေးက အလွန်အဖိုးတန်တဲ့အင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီအင်ဇိုင်းဟာကျောက်ကပ်ရဲ့cellတွေကို အသစ်တည်ဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်ပရိုတင်းတွေဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ကျောက်ကပ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို cellအသစ်တွေနဲ့ဖာထေးပြုပြင်ပြီးကျောက်ကပ်ကိုပကတိ အကောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ပဲကတ္တီပါမှာဗီတာမင်Eတွေအများကြီးပါတဲ့ အတွက်သွေးကိုသန့်စင်ရာမှာအာနိသင်ပိုထက်မျက်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲကတ္တီပါကိုကျောက်ကပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအာဟာရလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကောင်းလွန်းလို့လည်းအင်္ဂလိပ်တွေကပဲကတ္တီပါကိုkidney bean (ကျောက်ကပ်ပဲ)လို့အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အမြဲတန်းကောင်းစေဖို့အတွက်ပဲ ကတ္တီပါကိုစားပေးရမယ်ဆိုတာ သိရှိပြီဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးအများကြီးမစားရပါဘူး။ ပဲကတ္တီပါမှာပါတဲ့အမိုင်နိုအက်စစ်ကိုကျောက်ကပ်ကအများကြီးမလိုဘူး။ များသွားရင်ကျောက်ကပ်အတွက် အဆိပ်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရုံလောက်ပဲစားဖို့လိုပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ကိုတစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို လိုက်နာမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရှောင်ရန်ကိုအရင်ပြောမယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာအအေးကိုမကြိုက်ဘူး၊ အပူကိုကြိုက်တယ် ။ဒါကြောင့်မနက်စောစော ကျောက်ကပ်အေးနေချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့အားကစားမလုပ်သင့်ဘဲ နေပူဆာလောက်ပဲလှုံရမယ် ။ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုပြုရင်ကိုယ်တွင်းမှာ လက်တစ်အက်စစ်တွေများလာတယ်။ အဲဒီလက်တစ်အက်စစ်ကကျောက်ကပ်ရဲ့ အဆိပ်ပြဲဖစ်တယ်။ ပျူရင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေစားရင် ထွက်လာတဲ့ယူရစ်အက်စစ်ကလည်းကျောက်ကပ် အတွက်အဆိပ်ပြဲဖစ်တယ်။ ဆိုဒီယံဆားနဲ့ဟင်းခတ်မှုန့်အ ရက်သေစာသကြားဖြူတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ခေတ်ပေါ်အစားအစာတွေမှာပါလာတဲ့အဆိပ်တွေပဲပေါ့။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာ ထက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ပျက်စီး ရတာကပိုဆိုးပါတယ်။ကြောက်လန့်မှုတစ် ခုခုနဲ့ကြုံလိုက်ရတာနဲ့ကျောက်ကပ်ကကျုံ့ပြီးရပ် သွားရော။စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ စိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ပရိဒေဝမီးတောက်ခြင်း ၊ဒေါမနသဖြစ်ခြင်းတွေကကျောက်ကပ်ကိုတိုက်ရိုက် ထိတတ်လို့ယောနိသောမနသီကာယ လို့ခေါ်တဲသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနှလုံးသွင်း တတ်အောင်ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဆောင်ရန်ကတော့ရေများများသောက်ခြင်း၊ ကျောက်ဖရုံသီးစားခြင်း ၊ဆိုဒီယံဆားအစားပန်းရောင်ကျောက်ဆား။ ပင်လယ်ဆား၊ ပိုတက်စီယံဆားတို့ကိုမျှသုံးခြင်း၊ အာဟာရမျှတစုံလင်အောင်စားသောက်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ခြင်းနဲ့ဗီတာမင်D ရအောင်နေပူဆာလှုံပေးခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထမင်းကိုအသားငါးဟင်းတွေနဲ့အမြဲစားနေရတာမငြီးငွေ့ဘူးလားဗျာ။ ပဲကတ္တီပါသုတ်လေးနဲ့အရသာရှိရှိစားကြည့်ပါလား။ အမယ်များများမလိုပါဘူး။ ကြက်သွန်နီ၊ နှမ်းဆီ၊ကျောက်ဆား ၊ငရုတ်သီးစိမ်းတွေပဲလိုတာပါ ။ကြက်သွန်နီကို မွှန်မှာကြောက်ရင်အမွှန်သတ်လို့ရတယ် ။ကြက်သွန်နီကိုလှီးပြီးဗင်နီဂါရည်၊ ဆားနဲနဲတို့နဲ့ခဏ နယ်နှပ်ထားလိုက်ပါ။ ကြက်သွန်နီကအမွှန်တွေပျောက်သွားပြီးချိုလာရောဗျ ။အဲဒီတော့မှာပဲကတ္တီပါသုတ်ထဲ ရောနယ်ပြီးထမင်းပူပူလေးနဲ့စားကြည့်ပါ။ ဆွေမျိုးတောင်မေ့မယ်ဗျို့
စာအုပ်အမည် – ပထမတန်းစားကျန်းမာရေး
Previous Article လူရွှင်တော်ကြီးဦးစိန်ရိုးဟာ ပြင်းထန်တဲ့လောကဓံရိုက်ချက်တွေကြောင့် ရယ်မောခြင်းမရှိတော့တာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ
Next Article ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ရောက် သွားတဲ့ကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ